musha South AMERICA FOOTBALL STORies Vanotamba Nhabvu Vanotamba Emi Buendia Yemwana Nhau uye Untold Biography Chokwadi
LB inopa Nhoroondo Yese yeBhola Genius iyo inozivikanwa zvikuru se "Buendia". Yedu Emi Buendia Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Hupenyu nekusimuka kwaEmi Buendia. Mufananidzo Wemikwereti: Instagram uye Lanuevacronica.
Ehe, munhu wese anoziva nezve kugona kwake kugadzira mikana kana kuita yekupedzisira-yechitatu yekupfuura. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Emi Buendia's Biography iyo inonakidza kwazvo. Iye zvino pasina kumbopfuurira mberi, ngatitangei.
Emi Buendia Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Emiliano Buendía Stati akaberekwa pazuva re25th raDecember 1996 kuguta reMar del Plata kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweBuenos Aires, Argentina. Akazvarwa kuna amai vake, Karina uye kuna baba vake, Eduardo.
Emi Buendia vabereki Karina naEduardo. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Kutenda kuberekwa muArgentina - nyika inozivikanwa nekugadzira mhando bhora bhora se Maradona uye Messi - Buendía inoratidza seArgentina yemuchena wedzinza ane South America midzi. Akakurira kumba kwake kuguta - Mar del Plata kwaakakurira pamwe nevanun'una vaviri - Augustin naJoaquin.
Mufananidzo wehuduku hwaEmi Buendia (kuruboshwe) achikurira kumba kwake kuguta nemunun'una Augustin. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Kukura muMar del Plata, Buendia aive mukomana mudiki kwazvo aive akakurisa kuita nhanha kwete vamwe vana kunze kwehama dzake. Zvisinei, aifunga zvakanyanya nezvebhola kupfuura chero chinhu chipi zvacho uye ane zvinhu zvakaita sekumhanya uye stamina izvo zvaitaura zvakanaka nezve ramangwana rake mumutambo.
Emi Buendia Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Dzidzo neKubata Buildup
Pakazosvika Buendía paakange ave zera 5, akatanga kutamba nhabvu yenzvimbo yenzvimbo Cadetes de San Martín, chiitiko chaakasanganisa nekufunda kuPeralta Ramos Institute muguta rake rekwa Mar del Plata.
Emi Buendia akatanga basa rake rekuvaka pavakomana kirabhu Cadetes de San Martín. Mufananidzo Wemikwereti: Instagram uye pamwecomenorwich.
Paaive kuCadetes de San Martín, Buendia akapedza makore matanhatu ehupenyu hwake hwepakutanga achitamba zvidiki-zvidimbu zvekunze zvemitambo. Nhabvu yekusimudzira kugona kugona kuratidza hunyanzvi hwehunyanzvi uye hunyanzvi hwekunyepedzera kupfuura zera rake uye nekuremerwa size yakamuita kuti abude muArgentina nyika- Juan Esnáider uyo akakurudzira kuti aenderere mberi nekuvaka basa mumutambo kuReal Madrid Academy.
Emi Buendia Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Basa Rokutanga Upenyu
Kunyangwe Buendia aive 11 zera rekutanga paakasvika Real Madrid, aive achiri mashoma mainini padyo nehuswa hweanomira turf pitch iyo yaakaramba achitambudzika kuti aratidze kukosha kwake.
Emi Buendia akasvika paReal Madrid Academy semwana mudiki we11-gore mu2008. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Kunonoka kukura kwaBuendia pamwe nekusakwanisa kwake kuramba achimhanya-kunge mutambo wekumhanya wakazomuita kuti abve mukirabhu makore maviri gare gare. Neraki, akaunzwa naGetafe uyo akamusainira mazuva abva kuReal Madrid.
Emi Buendia Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Mugwagwa Mukurumbira Nhau
Wechidiki haana kutambisa nguva kuti agare paGetafe paakamuka nepakati nenzvimbo dzakakwirira uye hunyanzvi isati yawana nzvimbo mune yechikwata chechikwata chechikwata pazera re17. Rake basa raionekwa senge rakaramba rakatsiga kumusoro trajectory kusvika 2015 / 16 mwaka akaona Getafe achitambura neLaLiga.
Hazvina kutora nguva refu kusati kwaenda Getafe kudzvanywa akarangana nekukuvara kwakasiya Buendia zvishoma pasi. Pakazosvika nguva Getafe paakazoguma ave kuita exgation, Buendia aigona kuve nyore kuona kuvaka basa pamabhenji nekuda kwekukuvara kwehudyu.
Kusimuka kwaEmi Buendia paGetafe kwakashatiswa pamwe nekukuvara uye kukuvara. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Emi Buendia Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Kumuka Mukurumbira Nhau
Buendia akanyatsodzorerwa akazopedzisira akweretwa kune wechipiri-tier kirabhu Cultural Leonesa muna Chikunguru 2017 kuzvidzikunura. Kuenda kwacho kwakatora kusatarisika kwakazvimba kuti kuve chinoparira budiriro yaBuendia sezvo akave akagwinha mushe mukurwisa nhandare yepakati. Pakupera kwemwaka, Buendia aive nezvikonzero zvekunyemwerera zvakare paakabata mutambi waLeonesa we mubairo wemwaka!
Emi Buendia aive Cultural Leonesa mutambi we2017-2018 mwaka. Mufananidzo Wemifananidzo: Lanuevacronica.
Norwich yakakurumidza kuuya ichidana Buendia uyo airatidzika kuva akakodzera kuronga kwavo kuti vadzokere muPremier League. Paasayina chibvumirano chemakore mana nedivi raakasiya, Buendia akatamba kusvika pakatarisirwa apo akarova zvibodzwa zvakazara zve8 muEnglish Soccer League (EFL) kubatsira Norwich kusimudzirwa kuPremier League. Kukurumidza kusvika parizvino Buendia akazvimisikidza semutambi wetsiva wePremier kuNorwich uko ari kutarisirwa kuramba achitamba nhabvu yepamusoro kusvika pa2024.
Emi Buendia akasaina chibvumirano chitsva neNorwich City muna Chikunguru 2019. Image Chikwereti: Canaries.
Emi Buendia Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Relationship Life Facts
Izvo zvakaomarara zvakaoma kumisikidza chaiyo mamiriro ehukama hwehukama hweBuendia panguva yekunyora. Zvisineyi, iye ari pakati pekufambidzana nekuroora. Mukadzi ari pamufananidzo werudo rweBuendia anozvitumidza zita raClaudia.
Emi Buendia nemusikana wake kana wag Claudia. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Kunyangwe zvisiri zvechokwadi kana Buendia akambove nerudo nhoroondo nevamwe vakadzi vasati vasangana naClaudia, isu tine chokwadi chekuziva kuti maRightbirds aive pamwechete pamberi pe2018 uye aine mwanakomana pamwe anonzi Thiago.
Emi Buendia nemukadzi wake nemwanakomana Thiago. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Emi Buendia Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Upenyu hweMhuri Zvechokwadi
Emi Buendia anobva kumhuri inonakidza uye yepakati yemhuri. Ona zvese nezvehupenyu hwemhuri yake.
Pamusoro paBaba vaEmi Buendia: Eduardo ndibaba vaBuendia. Kufanana nevose vanotsigira nhabvu mubereki, akaona kuti Buendía hutano panguva yekuita basa rake kuvaka kuMadrid nevechidiki masisitimu eGetafe nekushanyira nguva dzose kune nyanzvi yebhola kunyangwe zvitambi zvaitaura zvinopesana nekufarira kweiye mutambi wenhabvu. Chisungo pakati pababa ve vatatu uye Buendia chinoramba chichiwedzera kusimba sezvo nhabvu inorwisa isingatomboregedza mukuita kuti mhuri yake izvikudze kana iri kana kusara kwenzvimbo yekutamba.
Pamusoro paamai vaEmi Buendia: Carina Is Buendia amai uye zvine nharo mukadzi mushure meBuendía mwoyo. Pamusoro pezvese, ndiye muchengeti wenyaya pamusoro pechibayiro chakaitwa nemhuri kuti ave nechokwadi chekuti Buendia zviroto zvekutamba nhabvu yepamusoro zvakabudirira. Iye anogoverana mumhuri mukurumbira mutsva nekuwonekwa mumifananidzo inotora Buendia achipedza nguva yakanaka nemhuri pamwe nekutora selfies naye kana vachienda kunobuda.
About Emi Buendia's Siblings: Buendia ane vakoma vaviri vanozivikanwa saAugustin naJoaquin. Ivo duo havasi kugara pasi pemumvuri waBuendia asi vachigara zvakanaka mumakwenzi avo emabasa uye zvavanofarira. Ivo vanogara pamwe chete naBuendia chero nguva yaari pazororo uye vanomubatsira kumutsa ndangariro dzezvakanaka zvemazuva ekare zviitiko zvavaive nazvo sevana.
Emi Buendia nevabereki nehama mbiri.Image Chikwereti: Instagram.
About Emi Buendia's Hama: Nezve muti wakakura wemhuri waBuendia, vanababa vake nasekuru naamai vake ndezvimwe zvezvakavanzika zvebhora zvisina kuvharwa apo pakanga pasina zvinyorwa zvevakoma vake, babamunini, babamunini uye nababamunini. Saizvozvowo, hama dzaBuendía hama dzake dzichiri kuzotaridzwa muzviitiko zvakakomba zvehupenyu hwake uye kumuka kusvika nhasi.
Emi Buendia Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Personal Life Facts
Buendía ane hunhu hunoshamisa hwekufamba-ne-kuyerera uhwo hunopedzisira hwamuita kuti ave neakafanana nevamwe. Mukuwedzera, iye anoratidza Aquarius zodiac maitiro ekuve Kuongorora uye kuita-yakatarisana.
Kure kwekutamba mitambo yemakwikwi uye kuenda kunodzidziswa, Buendía ine zvido zvishoma uye zvekuzevha zvinosanganisira kutarisa mafirimu, kuteerera mimhanzi, kushambira uye kutamba tenisi.
Emi Buendia anotamba Paddle Tennis sechinhu chinonakidza chiitiko. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Emi Buendia Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Lifestyle Facts
Taura mashandisiro anoita Buendia uye kushandisa mari yake, mari yakaunganidzwa yemubhadharo waanowana inotora kubva muhomwe yaanotambira yekutamba nhabvu yepamusoro apo vamwe vagari vepfuma yake mari yemari inowanikwa kubva kumabhizimusi ekuzivisa saNike.
Kunyangwe akaongorora mashandisiro emashandisirwo emari yaBuendia pakuwana zvinhu zvakaita semota nedzimba zvichiri kuongororwa, anorova vateveri seanorarama hupenyu hwemutambarakede nekushandisa nguva yakanaka kunzvimbo dzakanaka dzekuzorora kupote nyika.
Emi Buendia achinakidzwa nezororo rake kumahombekombe eMiami. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Emi Buendia Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Untold Facts
Tisati tazvidaidza kuti kuputira pane nyaya yehuvana Emi Buendía uye biography ndapota tsvaga pazasi zvimwe zvinhu zvisinganyatsozivikanwa kana zvisingataurike zvinogona kukubatsira iwe kuti umuzive zviri nani.
CHITENDERO: Nhabvu nhabvu haina kumbotaurwa ichitaura mazwi anogona kutipira chinyorwa chekutenda, kana kuti haana kuonekwa achitenda kune akakwirira achitamba nhabvu. Nekudaro, iko kusawirirana kuri mukumufarira kuve Mukristu.
RUDZIMAI RWenyika: Buendia akatanga bhizinesi rake rekunze kwenyika nekumiririra Spain achiri mudiki asati atendeuka kuti atambe kurudyi rweArgentina.
Emi Buendia achiridza Argentina U20 timu mu2015. Mufananidzo Chikwereti: AlongComeNorwich.
TATTOO: Haana kana tattoo rimwe chete pamuviri wake uye anorova vakawanda seanogona kuchengeta ganda risina ruvara kune iri nani chikamu chebasa rake.
KUSVIRA uye Kunwa: It zvingave zviri nyore kwazvo kuti Buendía arege kupa rubatsiro rwakakosha pane kuwona mavara achiputa kana kumwa.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu Emi Buendia Yehucheche Nyaya uye pamwe neSoldold Biography Chokwadi. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukawana chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, tapota shandisa nesu nekupindura pasi apa. Tichagara tichikoshesa uye tichiremekedza pfungwa dzako.
facundo salas Ndira 25, 2020 Pa 3: 56 pm
Iye munhu mukuru kubva kumhuri inozvininipisa, ine rudo. Aive mutambi mukuru we rugby. mhuri yake yese kubva kurugby kumashure.